एकजोडी श्रीमान्–श्रीमती सम्बन्धविच्छेद निर्णयमा पुग्न के के कारण हुनसक्छन् ?
महात्मा गान्धीको हत्या गर्न नाथुराम गोड्सेले यसरी किनेका थिए पिस्तोल ?
एजेन्सी । यो त सबेलाई थाहा छ कि महात्मा गान्धीको हत्या नाथुराम गोडसेले दिल्लीमा सन् १९४८ जनवरी ३० मा गरेका थिए । तर, धेरै मानिसलाई थाहा नहुनसक्छ नाथुराम गोड्सले जुन पिस्तोलद्वारा गान्धीको हत्या गरेका थिए त्यो उनले कहाँबाट खरिद गरेका थिए ।
गद्धाफीबारे यी कुराहरु धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ
लिबियाका पुर्व शासक जनरल मुअम्मर गद्धाफीको अन्त भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, आज पनि उनको चर्चा हुने गरेको छ । गद्धाफीको शासनकाल क्रुरता र
मंगलबार अवश्य गर्नुहोस् यस्ता काम गर्नुहोस्